Carl Henry Global - Politika momba ny tsiambaratelo GDPR sy fampiasana Cookie
Inona no vaovao azontsika?
Manangona vaovao avy aminao ianao rehefa misoratra anarana ao amin'ny tranokalanay, mametraka fepetra, manoratra ny gazetinay, mameno endrika na mametraka zavatra ao anaty sari-tsarinao.
Rehefa nandidy na nisoratra anarana eo amin'ny toerana, raha ilaina, dia mety ho nangataka ny hiditra ny: anaranao, adiresy e-mail, adiresy mailaka na telefaonina isa. Mety anefa, dia tsidiho ny toerana tsy nitonona anarana.
Google, amin'ny mpividy fahatelo, dia mampiasa cookies ho an'ny dokam-barotra ao amin'ny tranokalanao. Ny fampiasan'i Google ny cookie DART dia ahafahanao manisy doka amin'ny mpampiasa anao miorina amin'ny fitsidihany ny tranokalanao sy tranonkala hafa ao amin'ny Internet. Ireo mpampiasa dia afaka misafidy ny fampiasana ny cookie DART amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny adihevitra momba ny fiainana manokana momba ny tambajotra Google.
Inona no mampiasa ny Information for?
Izay mety ho ny vaovao avy aminao no manangona dila azo atao amin'ny iray amin'ireto fomba manaraka ireto:
Hanova ny traikefanao - (Ny fampahalalana omenao dia manampy antsika hamaly tsara kokoa ny zavatra ilainareo manokana)
Hanatsara ny tranokalanay - Miezaka foana izahay hanatsara ny tranokalanay amin'ny tranonkala mifototra amin'ny fampahalalana sy ny valin-kevitra azonay avy aminareo
Hanatsara ny serivisy mpanjifa - Ny fampahalalana omenao dia manampy antsika hamaly tsara kokoa ny fangatahanao amin'ny serivisy sy ny zavatra ilaina
Hikarakara trosa - Ny fampahalalana anao, na olom-pirenena na tsy miankina, dia tsy hamidy, hifanakalo na handefasana, na hanome any amin'ny orinasa hafa na inona na inona antony, raha tsy misy ny fankatoavanao, fa tsy noho ny tanjona maneho ny fanomezana ny vokatra novidina na ny serivisy nangatahana.
Hikarakara ny tolotra - fifaninanana, fampiroboroboana, fanadihadiana na tranonkala hafa
Mandefa mailaka imailaka - Ny adiresy mailaka omenao ny fanodinana ny baiko, dia azo ampiasaina handefa anao vaovao sy fanavaozana mifandraika amin'ny baikonao, ankoatra ny famoahana ny orinasan-tserasera, ny fanavaozana, ny vokatra momba ny vokatra na ny serivisy, sns.
Fanamarihana: Raha amin'ny fotoana rehetra tianao ny serasera tsy handray hoavy mailaka, dia ahitana ny antsipirihany Unsubscribe toromarika eo amin'ny farany ambany ny mailaka tsirairay.
Mampihatra fepetra fiarovana maromaro izahay mba hitazonana ny fiarovana ny mombamomba anareo manokana rehefa mametraka baiko na miditra, manolotra, na mahazo ny mombamomba anao manokana.
Manolotra ny fampiasana ny serivisy azo antoka isika. Ny fampitam-baovao mibaribary / azo antoka dia omena amin'ny alalan'ny Secure Socket Layer (SSL) teknôlôjia ary avy eo amidy ao amin'ny banky mpanome fandaharam-bola fidirana fidirana amin'ny vavahadim-baomiera mba hahazoana ireo olona nahazo alàlana manokana amin'ny zon'ireo rafitra ireo, ary mitaky ny fitazonana ny tsiambaratelo.
Aorian'ny fifanakalozana, ny fampahalalana manokana ataonao (karatra famoaham-bola, nomerao ara-tsosialy, vola, sns) dia tsy ho voatahiry ao amin'ny tranonkalanay.
Eny, Cookies dia tahiry kely izay tranonkala na mpanome tolotra an-tseranana ho an'ny solosainao amin'ny alàlan'ny tranonkalanao (raha avelanao) izay manome fahafahana ny tranokalan'ny orinasa na ny orinasa mpanome tolotra mba hahafantarana ny navigateur sy ny fisamborana ary hahatsiaro ny fampahalalana sasantsasany.
Mampiasa cookies izahay mba hanampiana anay hahatsiaro sy handefa ireo zavatra ao anaty sarintany, hahatakatra sy hamonjy ny safidinareo amin'ny fitsidihana amin'ny hoavy ary hanangona antontam-baovao momba ny fifamoivoizana sy ny fifanakalozan-tranonkalan'ny tranonkala mba ahafahantsika manolotra traikefa sy fitaovana tsara kokoa amin'ny hoavy.
Raha tianao, dia azonao atao ny mifidy ny solosainao hampitandremana anao isaky ny mandefa cookie iray, na azonao atao ny misafidy ny hamadika ny cookies amin'ny alàlan'ny tranokala navigateur. Tahaka ny ankamaroan'ny tranonkala, raha toa ianao ka mamadika ny mofomamy, ny sasany amin'ny serivisinay dia mety tsy miasa tsara. Na izany aza dia mbola afaka mandefa baiko ianao amin'ny fifandraisana amin'ny serivisy mpanjifa.
Ve isika hamoaka misy fanazavana ny antoko any ivelany?
Tsy mivarotra, ara-barotra, na raha tsy izany dia hamindra ho any ivelany ny antoko manokana vaovao fantatra. Tsy ahitana itokisana antoko fahatelo izay hanampy antsika eo amin'ny miasa ny tranonkala, nitarika ny raharaham-barotra, na miasa eo ianareo, raha mbola ao ihany ireo antoko manaiky ny hitandrina izany vaovao tsiambaratelo. Mety ihany koa ny hamoaka ny vaovao rehefa mino fanafahana dia mety ny manaraka ny lalàna, mampihatra ny toerana politika, na miaro ny antsika na ny olon-kafa ny zo, ny fananana, na ny fiarovana. Na izany aza, tsy fantatra vahiny manokana dia azo omena fanazavana amin'ny antoko hafa ho an'ny barotra, dokam-barotra, na fampiasana hafa.
Indraindray, amin'ny fahamendrehantsika, azontsika atao ny manolotra na manolotra vokatra na serivisy avy amin'ny antoko na tranokala ao amin'ny tranokalantsika. Ireo tranonkala fahatelo dia manana politika manokana momba ny tsiambaratelo. Noho izany dia tsy manana andraikitra na andraikitry ny votoatin'ny tranonkala mifandraika amin'izany isika. Na eo aza izany dia mikatsaka ny hiaro ny fahamendrehan'ny tranokalanay izahay ary mandray ny valiny momba ireo tranonkala.
California Compliance Act
Satria manome lanjany ny fiainanao manokana izahay dia nandray ny fepetra ilaina mba hifanaraka amin'ny Lalàna mifehy ny fiarovana ny fiainana an-tserasera California. Noho izany dia tsy zarainay ny fampahalalana manokana ataonareo any ivelan'ny antoko raha tsy misy ny fanekenareo.
Ao anatin'ny Lalàna mifehy ny fiarovana ny fiainana manokana California California, ny mpiserasera rehetra ao amin'ny tranokalanay dia mety hanova ny fampahalalana azy ireo amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fidirana ao amin'ny sehatry ny solosaina ary mankany amin'ny pejy 'Edit Profile'.
Mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny COPPA (Lalàna momba ny fiarovana ny zaza tsy ampy taona) isika, tsy manangona fampahalalana avy amin'ny olon-drehetra amin'ny taona 13 izahay. Ny vohikala, ny vokatra ary ny tolotra dia voatendry ho an'ny olona izay farafaharatsiny 13 taona na mihoatra.
Ity-tserasera politika fiainana manokana natao ho an'ny vaovao nangonina amin'ny alalan'ny tranonkala, fa tsy ny vaovao nangonina ivelan'ny aterineto.
Please koa ny mitsidika ny fepetra fizarana fananganana ny fampiasana, Fampitandremana, ary ny fetran'ny mety ho vitan'ny madio mifehy ny fampiasana ny vohikala amin'ny http://www.carlhenryglobal.com/terms-and-conditions
Amin'ny alalan'ny fampiasana ny vohikala, ianao manaiky ny fiainana manokana ny politika.
Raha manapa-kevitra ny hanova ny politikan'ny fiainan'ny tenanao manokana izahay dia hametraka ireny fanovana ireny eto amin'ity pejy ity, ary / na hanavao ny daty maodim-pitondran-tenan'ny fiainana eto ambany.
Ity politika ity dia novana farany tamin'ny 25 / 03 / 2018
Raha misy fanontaniana momba izany misy fiainana manokana politika dia manorata anay mampiasa ny fanazavana eto ambany.